Banyere Anyị - Shandong Drick Analysis Instruments Co., Ltd.
Shandong Drick Analysis Instruments Co., Ltd. bụ isi na nyocha, n'ichepụta ọrụ na teknụzụ maka laabu na ụlọ ọrụ nyocha ngwa ọrụ.
Anyị na-arụkwa ọrụ dị ka ndị nnọchi anya ma nye ọrụ nnwale maka ngwaahịa nke ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ mara na ahịa ndị China. Na mgbakwunye, anyị na-arụsi ọrụ ike ịkwalite ọrụ dịka azụmaahịa, nkwado teknụzụ na ọrụ erere. Ngwaahịa anyị na-etinye aka na ngalaba dịka ịde ederede, nkwakọ ngwaahịa, mbipụta; roba na plastik; textile na-abụghị kpara Industry; nri, ọgwụ na wdg.
Drick Analysis Instruments Co., Ltd. enwetala CMC (China Metrology Asambodo) (Nke 01000127), European Union OA asambodo, PRC onwe mbubata na mbupụ ikike, wdg O nyewo ọkachamara ule ngwá puku mmadụ iri n'ụlọ ahịa, na ya ngwaahịa e exported North na South America, Australia, na European Union, na Middle East na Southeast Asia, wdg
Mgbe oruru, dum mkpara nke Drick dịrị n'otu ọnụ, na-arụsi ọrụ ike ma si otú ahụ mee ka ụlọ ọrụ anyị na-a pụrụ iche onye na-ewere Usoro dị ka ya mgbọrọgwụ, esighịkwa ezu usoro ego na nke elu mma. Companylọ ọrụ a nwere ndị ọrụ ịzụ ahịa nwere ume na ogo dị elu yana ndị ọrụ nkwado ọfụma nwere ezigbo ihe ọmụma banyere usoro akụrụngwa yana usoro itinye n'ọrụ. E wezụga, anyị na-enweta mkpara nke mgbe-ire ọrụ na mkpokọta technology na ọtụtụ ahụmahụ. Ngwaahịa dị elu, usoro ọmarịcha, ọrụ siri ike, ọrụ obi ụtọ, ha niile na-amụ ọdịbendị pụrụ iche nke Drick taa.
Drick na-eme mgbe ọ bụla na teknụzụ kachasị ọhụrụ ma na-eme ihe iji nye ndị ahịa anyị ngwaahịa kachasị elu. Drick na-emesi ike na nkà na ụzụ ọzụzụ na àgwà mmepe nke ndị ọrụ ha. N'ihi ya, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ndị ahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ zuru oke. Ihe kachasị dị na teknụzụ, ngwaahịa na ọrụ na-ewetara ndị ahịa anyị ọtụtụ elele mgbe ha na-eji teknụzụ na ngwaahịa ọhụrụ.